Maamulka Hirshabeelle Oo Culeeys Ku Haayo Col iyo Abaar -
HomeWararkaMaamulka Hirshabeelle Oo Culeeys Ku Haayo Col iyo Abaar
Maamulka Hirshabeelle Oo Culeeys Ku Haayo Col iyo Abaar
Dowlad Gobaleedka Hirshabelle Waa Maamulkii ugu dambeeyay ee Fedaralka Soomaaliya waxayna jirta ku dhawaad 3 sano, maamulka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa hoos usii socda waxaana Labada Gobal ee Hirshabeelle ka taagan Col iyo Abaar.
Al-Shabaab ayaa ku xoogeestay deegaanada Hirshabeelle waxayna kordhiyeen Weerarada ay ka geysanayaan gobalka Shabeelaha dhexe, gaar ahaan inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar.
Saraakiisha amaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay Shabaab ku soo xoogeestayn Balcad waxayna halkaasi ka fuliyeen weeraro badan oo kii ugu xoganaa ay Shabaab maalin cad kula wareegeyn degmada Balcad ee gobalka Shabeelaha dhexe.
Wixii ka dambeeyay waqtigaas waxaa cabsi xoog leh ay soo wajahday Shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle kadib markii ay ka digayn Laamaha amaanka in ay Shabaab damacsan yihiin weeraro ay ka geestaan Jowhar.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay fariisin xoog leh ay ka sameestayn duleedka degmada Jowhar ee Xarunta Hirshabeelle waana sababta keentay in Jawi cabsi ah ay Gasho Jowhar.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Shiikh Cusmaan Barre Maxamed oo ka hor hadlay Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in aysan maamulkooda awood aheyn Qatarta amni ee ka jirta Hirshabeelle.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale Culees xoog leh ku haaya gobalka Hiiraan, waxayna weeraro ka geestaan duleedka magaalada Beladwayne ee Xarunta Gobalka Hiiraan, goob joogayaal ayaa sheegay in aan Beladwayne looga bixi Karin safar dhulka ah.
Hirshabeelle, sidoo kale waxaa soo wajahaya Colaad Beeleedyo Muddo soo taagnaa kaas oo ay dad badan ku dhintayn kuwa kalane ay ku dhaawacmayn.
Dagaal Beeleedyadii ugu dambeeyay ee Hirshabeelle ayaa ka dhacay Deegaanada Baan-yaaley ee Gobalka Hiiraan iyo Gaashaanle ee gobalka Shabeelaha Dhexe, waxaana tirade dhimashada ay ka badan tahay 10 qof, mana jirto ilaa hadda dadaalo Nabadeed oo ay Hirshabeelle ka sameysay.
Dhinaca kale Hirshabeelle ayaa deegaanadeeda waxaa ka taagan Abaaro saameeyay dadka iyo Duunyada kadib markii uu guray Wabiga Shabeelle ee mara Labada Gobal ee ka kooban Tahay Hirshabeelle.
Dad badan ayaa Biyo la’aan daran waxay ku heysaa Hirshabeelle waxaana meelaha qaar la soo sheegayaa in ay Cudurro ka dilaacayn kadib markii ay dadkaasi cabayn biyo wasaqaysan.
Maamulka aan deegaanadiisa dhibka ka jira ka soo sheekeysaynay ee Hirshabeelle wali uma bisla in wadashaqayn in ay ku dadaalaan wax ka qabashada dhibaatadaasi.
Maamulka gaar ahaan Baarlamaanka iyo Madaxda Sare ayaa waxaa ka dhax taagan khilaaf siyaasadeed kaas oo waligiisba soo taagnaa, kulankii ugu dambeeyay ee Xildhibaanada Hirshabeelle ayaa qaar kood madaxda maamulkaasi waxay ku eedeeyeen Musuq iyo Wax isdaba marin.